Izindaba - Ukwenza ngcono ukusebenza kahle kokuqhumisa ngokudubula, ngabe ukhethe i-abrasive efanele?
Kuqhuma isibhamuinqubo evamile yokwelashwa kwendawo yensimbi. Isetshenziswa kabanzi ekubunjweni, insimbi, ubuciko bokusebenza, izingxenye zokucubungula izinsimbi nezinye izimboni.Ngokuthuthukiswa kwesayensi nobuchwepheshe nokuthuthukiswa okunamandla kokukhiqiza, sinemfuneko ephakeme nangaphezulu yekhwalithi yokwelashwa komhlaba, izindleko nokusebenza kahle njll. okuhlobene nekhwalithi yokugcina yendawo kanye nenani lomkhiqizo, ngakho-ke ihehe ukunakwa okwengeziwe.
Izici eziyinhloko ezithinta ukusebenza kahle kwe- ukuqhuma kwesibhamu:
1. Ikhwalithi ye-abrasive esetshenziselwa ukuqhumisa ngokudubula: njengohlobo, isilinganiso, inkomba yokusebenza (ubulukhuni, impilo yokukhathala) ye-abrasive, njll .;
2. Ukuhleleka kwenqubo yokuqhumisa: isikhathi sokudubula, isivinini, ukugeleza, njll .;
3. Ukuhleleka kwesimo somshini wokuqhumisa: i-engeli yokudutshulwa, isimo sokuhlukana, umphumela wokususa uthuli, njll.
☛Ubudlelwano obuphakathi kosayizi wezinhlayiyana ezicwebezelayo nokusebenza kahle:
Inani lama-abrasives aphonswa yimishini yokuhlanza ngeyunithi ngayinye likhulu futhi liphindwe kabili ngaphansi kwesisindo esifanayo, futhi ukusebenza kahle kokuhlanza kungathuthukiswa ngempumelelo.
Umphumela wesilinganiso sokuxuba esisebenzayo ekusebenzeni kahle:
Kuyisifundo esibuhlungu kubasebenzisi ukuthenga ama-abrasives ashibhile futhi asezingeni eliphansi, okungamakhulu ambalwa ama-yuan ashibhile kusuka entengo yeyunithi. Kodwa-ke, imfucuza yezindleko ebangelwe ukuncishiswa kokuqhuma kokusebenza kahle ingaphezulu kwalesi samba, futhi ukulahleka kwezindleko okubangelwe yimpilo yesevisi ephansi kufanele kubalwe.
Ngokubheka lo mkhuba, sithuthukise ngempumelelo uhlobo olusha lwama-abrasives wokusebenza okuphezulu - ama-abrasives we-carbon low（Isibhamu esiphansi sensimbi yekhabhoni）- ezingasiza kangcono amafektri ukufeza inhloso yokwehlisa izindleko nokwandisa ukusebenza kahle. Sineqembu lobuchwepheshe lobuchwepheshe, elihlanganiswe neminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho kwamakhasimende, ngokulungisa inani lezinhlayiya ezisebenzisayo nokwenziwa kahle kwemingcele yemishini yomshini wokudubula, singakwazi ukuthuthukisa ukusebenza kahle kokuqhuma kwesibhamu, sisize ama-opharetha aqaphele ukuncika ukuphathwa kwenqubo yokuqhuma, bese uphendulela ukulahlekelwa kube yinzuzo, futhi kusize ngempumelelo ukunciphisa izindleko nokwandisa ukusebenza kahle.
Ngaphezu kokuhlinzeka ngemikhiqizo esebenza kahle kakhulu, sigxila ocwaningweni lobuchwepheshe bokudubula, siqashe ochwepheshe abaziwayo bokuqhumisa ekhaya naphesheya njengokwesekwa kwenkampani kwezobuchwepheshe, ngibe nethimba lenkonzo yezobuchwepheshe, futhi sinikeze izinkulungwane zabantu esizeni ukusebenzela amakhasimende minyaka yonke, kugxilwe ekuhlinzekeni ukwesekwa kwezobuchwepheshe kanye nezinsizakalo zohlelo lokuqhumisa, Gxila ocwaningweni nasekuthuthukisweni kusuka kubuchwepheshe bokukhiqiza obunolaka kuya kubuchwepheshe besicelo somkhiqizo kubuchwepheshe bokusebenzisa esizeni.
Ngemuva konjiniyela esizeni sokulandela amakhadi, siza futhi uqondise imininingwane yekhasimende esizeni;
1. Sungula futhi uthuthukise uhlelo lokuphatha lokungeza nokusebenzisa ama-abrasives wokuqhumisa;
2. Ukuphathwa okucwengiwe (ukwenziwa kwedijithali kokuxubana kwesilinganiso se-abrasive).
Ukuxubana okwenziwe ngendlela efanelekile kubandakanya ukusatshalaliswa okulinganiselayo kwezinhlayiya ezinkulu, eziphakathi nendawo nezincane. Ukusatshalaliswa kuguquka njalo ngenxa yokonakala okubabayo okubangelwa umthelela ophindaphindiwe ebusweni bento yokusebenza. Kuma-abrasives aphile isikhashana, kunzima ukugcina ibhalansi efanelekile ngenxa yokubola kwawo okusheshayo nokususwa ohlelweni. Lokhu kushintshashintsha kokusatshalaliswa kosayizi kuthinta ngqo ukuphela komhlaba nokukhiqiza.
Isikhathi sokuqhuma sokudubula sifinyeziwe kusuka kumasekhondi angama-90 kuya kumasekhondi angama-80, futhi ukusebenza kahle kukhuphuke ngaphezu kuka-10%;
Amasayithi amaningi wokuqhumisa awadlondlobele ngokwanele ekusetshenzisweni okulukhuni nangokulungiswa kokudutshulwa, noma isiza asikafiki kuzidingo zokuphathwa okuhle, okuholela ekusebenzeni noma ezinzuzweni zokuqhumisa ngokudubula okungadlalwanga kahle.
Esimeni sezimakethe esiya ngokuya sincintisana, amabhizinisi okukhiqiza nawo akhathazekile ngokuncishiswa kwezindleko zesixhumanisi ngasinye somkhiqizo. Ngenkathi sikhathazekile ngezinto zokwenziwa ngobuningi nezixhumanisi ezisemqoka ezifana nezinto zokusetshenziswa, ukuncibilikisa, ukuwelda nokuvunwa, kufanele sinake kakhulu ukulawulwa kokuhlanzwa kwesibhamu. Ukukhethwa kwama-abrasives asebenza kahle kanye nokusekelwa kobuchwepheshe ngokuqokwa ngokungangabazeki kuyisihluthulelo sokwenza ngcono ukusebenza kokuhlanza Indlela elula kakhulu yokunciphisa izindleko, lolu shintsho luzothuthukisa ubuchwepheshe besicelo seukuqhuma kwesibhamu kanye nokwenza ngcono ukulawulwa kwezindleko!
Ngaphandle kwe- ongaphakeme carbon steel shot：
I-TAA nayo iyumkhiqizo insimbi shot,insimbi grit,ophethe steel shot,insimbi engagqwali cut wire,insimbi engagqwali grit,i-carbon steel cut wire, abezindaba isipanji olwalwenza,i-aluminium cut wire, zinc cut wire, ucingo lokusika ithusi,garnet njalonjalo.
Ama-TAA's ukuqhumisa umshini & izingxenye eziselefuthi kungasiza ikhasimende ukufezekisa ukuthenga ngakunye kokuqhuma kwesicelo!